Nin 30 sano baxsad ka ahaa Booliska Mareeykanka oo Haweeneey isku badalay - iftineducation.com
Nin 30 sano baxsad ka ahaa Booliska Mareeykanka oo Haweeneey isku badalay
iftineducation.com – Qisadaan la yaabka leh ayaa ka dhacday dalka Mareeykanka, gaar ahaa Summerfield Township Michigan.
Ninkan oo lagu magacaabo John Kelly Centry Jr, ayaa mudo 30 sanadood ah baxsad ka ahaa Booliska Mareeykanka, waxaana loo haystaa kiis dil 2 qof.
Booliska, ayaa ugu dambeyn aaminsan in ninkaan ay u suurtagashay in mudadaas aadka u fog baxsad ka ahaado cadaalada uu iska dhigay Haweeneey.
John Kelly, ayaa tooreey ku dilay Gabar ay saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Barbara Gerber, sidoo kale waxa uu maalmo kadib qaarijiyay nin ay xiriir lahaayen oo lagu magacaabi jiray William Veith.
Hay’adaha dambi baarista Mareeykanka ayaa aaminsan, in John Kelly sida uu ku badbaaday xiligaas dheer ay tahay, inuu iska dhigay Haweeneey sidaasina ku noolyahay, waxaana la helay 5 sano kahor warar tibaaxaya inuu ku noolyahay magaalada California oo uu dharka Haweenka xirto, magacana wuu badashay.
Magacyada xildhibaanada iyo wasiirada ku dhaawacmay qaraxa
DAAWO:- XAASHI Bulxan oo Maanta Laga saaray Guri Dabaqa oo la’isku haystay